Kutengesa kwakanakisa 15 kara yeziso kumeso kadhibhodhi kusanganisa makeup runako rakagadziridzwa kumeso palette.
Chekutanga one:15 Ruvara Eyeshadow Palette, inosanganisira Glitter, Matte, Shimmer, Mettallic, Iridescent eyeshadows. Makore akapfuma esarudzo.
Iri ziso mumvuri disc rine gumi nemashanu marudzi eanodziya mumvuri weziso, akakodzera kushandiswa mukati mezuva kana kutamba. Shandisa rako rerudo mumvuri bhurasho kuti ugadzire yako pachako yakajeka kana yakatarisika kutaridzika, yakakodzera chero chiitiko.
Chechipiri chekutanga:Isu tiri nyanzvi yekugadzira yemumvuri weziso. Hunhu hwezvigadzirwa zvedu hunogona kufananidzwa nemhando hombe dzemhando, kunyange zvirinani. Ndokumbirawo uve nechokwadi chekutenga zvigadzirwa zvedu. Kana paine chero matambudziko nezvigadzirwa zvakagamuchirwa, tichava kubasa kwako chero nguva.
Chekutanga vatatu:Yakanyanya Ruvara Eyeshadow Palette, hupfu hwakatsetseka uye hwakapfuma mu pigment. Nyore kusanganisa uye Yakareba inogara. Chengeta makeup yako zuva rese.
Yakakwira Hunhu Yemaziso Shadow Powder: Yedu nyanzvi eyeshadow palette poda yakanyorova uye yakanyanyisa pigmented, isina mvura, yakanakisa ductility, yakasimba kunamatira. Eyeshadow iri nyore kupeta uye kusanganisa, matte uye inopenya yepamusoro pigmented eyeshadow palette
Yakashandiswa Zvakashata & Yakareba Kugara Gadzira Palette: Suit yezviitiko zvakasiyana, senge zvisina kujairika, salon, pati, muchato. Hutano uye zvisungo zvakachengeteka uye mhando huru. Inogona kuiswa pamuromo wepamusoro, kumeso, makumbo nemuviri.
Chechina chekutanga:Iyo gumi nemashanu yemavara eziso mumvuri disc ndicho chako chakavanzika chombo kuti ugadzire akakwana maziso ekugadzira. Makanaka maziso ekugadzira anoita kuti utaridzike uye uwedzere kutaridzika, uye inogona kuwedzera kuzvivimba kwako.
15 inozivikanwa Eyeshadow: kushandisa 15 akakurumbira mavara kuumba isingaperi kutaridzika, kutonhorera uye kunoshamisa. Zviri nyore kuturikidzana uye kusanganisa nekirimu, velvety, yakapfava uye yakapfava mavara epop yezviitiko zvakasiyana uye ako ese echirimo anotaridzika.
Nakidzwa kwenguva refu inogara yakanakisa yekupenda maitiro: yakakwira pigment, yakareba inogara ruvara, kwete nyore kudonha uye kubhururuka hupfu Inogona kugara kwezuva rose kukupa iwe wakasununguka chiitiko uye chengeta iwo wakakwana weziso mumvuri wekugadzira.
Super coloration, kupfava uye kutsetseka: kirimu kara uye rakapfava rakakurumbira ruvara gadzira akawanda anoshamisa chitarisiko! Hutano nechengetedzo zvigadzirwa, zvemhando yepamusoro, gadzira yakakwana maziso ekugadzira, zvine musoro uye zvine hungwaru kusanganisa kwemavara, ita kuti maziso ave akajeka uye azere nematatu-matatu.
Ratidza Shades: tsvuku, inopenya, champagne, uye goridhe inosangana kuti ipe inoratidzira kwazvo, duo-chromatic penya, unogona zvakare kushandisa mumvuri wedu wega. Icho chiyero chakanakisa chinotonhorera uye chinodziya.
Pashure: Maziso ekugadzira-BD9-C
Zvadaro: Maziso ekugadzira-BD15-KOODZIRA
JOYO © All Kodzero Dzakachengetedzwa. Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, Yakanakisa Makeup Brushes, Mini Lipstick, Ndarama Ziso Makeup, Matte Eyeshadow Palette, Yakanakisa Cream Eyeshadow, Shimmer Lipstick, Zvese Zvigadzirwa